Ithegi: umxholo wakho | Martech Zone
Maka: umxholo wakho
NgoMvulo, Februwari 24, 2020 NgoMvulo, Februwari 24, 2020 Shane Barker
I-2018 ibone malunga ne-80% yabathengisi basebenzisa umxholo obonakalayo kwizicwangciso zabo zemidiya yoluntu. Ngokufanayo, ukusetyenziswa kweevidiyo kukhule phantse ngama-57% phakathi kuka-2017 no-2018. Ngoku singene kwixesha apho abasebenzisi bafuna umxholo okhangayo, kwaye bakufuna ngokukhawuleza. Ukongeza ekwenzeni oko kunokwenzeka, nasi isizathu sokuba usebenzise umxholo obonakalayo: Kulula ukwabelana ngokulula ukukhumbula ukonwaba kunye nokuzibandakanya Kucacile ukuba kufuneka unyuse umdlalo wakho wentengiso obonakalayo.
Xa abantu becinga malunga nokwenza umxholo, bacinga malunga nedatha yobuqu ebandakanyiweyo kumxholo womyalezo we-imeyile. Ayisiyonto nje yokuba ngubani olindelo okanye umthengi wakho, ikwa malunga nokuba bakuphi. Ubeko lwasekhaya lithuba elikhulu lokuqhuba ukuthengisa. Ngapha koko, iipesenti ezingama-50 zabathengi abakhangela kwalapha kwi-smartphone yabo batyelela ivenkile ngaphakathi kosuku, nge-18% ekhokelela ekuthengeni ngokwe-infographic kaMicrosoft kunye neVMob,
NgoMvulo, Meyi 16, 2016 URick Chavie
Uphononongo lwamva nje lufumanise ukuba iipesenti ezingama-66 zokuziphatha kwi-Intanethi zibandakanya icandelo leemvakalelo. Abathengi bafuna ixesha elide, unxibelelwano lweemvakalelo oluhamba ngaphaya kokuthenga amaqhosha kunye neentengiso ezijolise kuzo. Bafuna ukuziva bonwabile, bekhululekile okanye bonwabile xa bethenga kwi-Intanethi kunye nomthengisi. Iinkampani kufuneka ziguquke zenze olu nxibelelwano lweemvakalelo nabathengi kunye nokuseka ukuthembeka kwexesha elide okunempembelelo ngaphaya kokuthenga kube kanye. Thenga amaqhosha kunye nentengiso ephakanyisiweyo kwimidiya yoluntu